ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်တို့ တွေ့ဆုံနိုင်ခြေအလားအလာ
နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပတဲ့ အပစ်ရပ်စာချုပ် ၃ နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကို တက်ရောက်လာတဲ့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် (အောက်တိုဘာလ ၁၅၊၂ဝ၁၈)
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်အတွက် ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ NLD နဲ့စစ်တပ်ကြား နှစ်ဖက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး အလားအလာ ရှိနေပေမဲ့ ကြိုတင်သတ်မှတ် စည်းကမ်းချက်မျိုးရှိလာမယ်ဆိုရင် တွေ့ဆုံဖို့ အခက်အခဲရှိနိုင်ကြောင်း NLD ပြောခွင့်ရ ဒေါက်တာမျိုးညွန့် က ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်း သတင်းထောက် ကိုဝင်းမင်းကို ပြောပါတယ်။
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အပြတ်အသတ်အနိုင်ရသွားတဲ့ NLD ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ကာကွယ်ရေး စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်တို့ နှစ်ဖက်ကြား တွေ့ဆုံမှုအလားအလာ ဘယ်လိုရှိမလဲ။
NLD ပြောခွင့်ရ ဒေါက်တာမျိုးညွန့်ကို ဦးဝင်းမင်းက ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
ဦးဝင်းမင်း ။ ။ အခုတခေါက်ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ကျောက်မဲမြို့နယ်မှာ အနိုင်ရအမတ်တဦးပစ်သတ်ခံရတာအပါအဝင် ဖြစ်လာတဲ့ထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေကို ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရအစိုးရပါတီ NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ပြောခွင့်ရ ဒေါက်တာမျိုးညွန့်ကိုမေးရာမှာ ရွေးကောက်ပွဲအောင်ပွဲခံမိန်းခွန်းပြောတာကအစကွာသွားပြီလို့အခုလိုစရှင်းပြပါတယ်။
ဒေါက်တာမျိုးညွန့် ။ ။NLD အောင်ပွဲမိန်းခွန်းကို ကျနော်တို့ရဲ့ ဥက္ကဌက ပြောလို့မရတော့ပါဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲလွန်သွားရင် နိုင်ငံရေးလုပ်ခွင့်မရှိတော့ပါဘူး။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ရဲ့ ဒုဥက္ကဌ (၂) ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင် က ရွေးကောက်ပွဲအနှစ်ချုပ်သဘောမျိုးကို (၁၈)ရက်နေ့က ပြောလိုက်ပါပြီ။ အဲဒါကိုပဲ အောင်ပွဲမိန်းခွန်းလို့ယူဆပါတယ်။ ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံက ထူးခြားတယ်ဗျ။ ကျနော်တို့ဝန်ကြီးချုပ်တွေအထိက ပြောလို့ရတယ်။ ပြည်ထောင်စုအဆင့် ဒုဝန်ကြီးတွေကအထက်ကို ပြောလို့မရတော့ဘူး။
ဦးဝင်းမင်း ။. ။ ဒီတခေါက်NLD အောင်ပွဲကြေညာချက်ထဲမှာ ဘယ်လိုထူးခြားတာကောတွေ့မိလဲ။
ဒေါက်တာမျိုးညွန့် ။. ။ ထူးခြားတာကတော့ ကျနော်တို့အဖွဲ့ချုပ်က တိုင်းရင်းသားအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး နောင်လာမဲ့ပြည်ထောင်စုအရေးအတွက် တိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်တာကတော့ ပြောလို့ရပါတယ်။
ဦးဝင်းမင်း ။. ။ အဲဒီအပေါ်မှာကော နောက်ထပ်တိုးတက်မှုတွေ ထူးခြားမှုတွေရှိလာသေးလား။
ဒေါက်တာမျိုးညွန့် ။ ။ ယျေဘူယျအားဖြင့်တော့ တိုင်းရင်းသားပါတီအများစုက လက်ခံပါတယ်။ အဓိကကတော့ ဖိတ်ခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုသွားမယ်ဆိုတာကတော့ ဆွေးနွေးမှုတွေပြီးမှ ဆုံးဖြတ်နိုင်မှာဖြစ်တော့ သူတို့အဖို့ ထင်ရှားတဲ့ တိကျတဲ့သတင်းစကားမပါဘူးဆိုပြီး တချို့ကျတော့ ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရမှန်မသိဖြစ်နေတာတော့ရှိပါတယ်။
ဦးဝင်းမင်း ။ ။ အဲဒီအပေါ်မှာကော သူတို့ကို ထပ်ဖြည့်ရှင်းပြစရာရှိသလား။
ဒေါက်တာမျိုးညွန့် ။ ။ ကျနော်တို့အတိအကျသတ်မှတ်ထားတာမရှိသေးပါဘူး။ ကျနော်တို့ဆွေးနွေးမှုရလဒ်တွေအရပဲ ပုံဖော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဦးဝင်းမင်း ။ ။ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ ထူးခြားတာကတော့ ကျောက်မဲဖြစ်စဉ်ပေါ့။ လက်ရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရ နောင်မဖြစ်အောင် တားဆီးမှုအပိုင်းမှာရော
ဒေါက်တာမျိုးညွန့် ။. ။ အဲဒီနေရာက နဂိုလ်ကတည်းက လုံခြုံရေးအားနည်းတဲ့နေရာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေးယခင်ကလည်း ဒီလိုပဲ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုတွေအကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတော့ နောင်မဖြစ်အောင်ကတော့ ပြည်တွင်းစစ်ချုပ်ငြိမ်းသွားမှသာ အကောင်းဆုံးတားဆီးမှုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဦးဝင်းမင်း ။ ။ ဒီပြည်တွင်းစစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးအတွက် လတ်တလောလုပ်ဆောင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားမှုအနေအထားရော အထူးသဖြင့်တော့ (၂) နှစ်နီးပါးကြာလာတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ AA ရခိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့နဲ့ တပ်မတော်တို့အကြားအပြန်အလှန်ကြေညာချက်တွေထုတ်တောင်းဆိုကြိုဆိုအပြီး တိုက်ပွဲတွေကစငြိမ်လာတဲ့အနေအထားမျိုးမှာ နောက်ထပ်တိုးတက်လာနိုင်ရော
ဒေါက်တာမျိုးညွန့် ။. ။ ကျနော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုအတွက်တော့ ဘယ်လိုအဟန့်အတားမှမရှိပါဘူး။ သို့သော်လည်း AA ဖွဲ့ကကြေညာထားတဲ့ ဖမ်းဆီးခံကိုယ်စားလှယ်လောင်းသုံးဦးပြန်လွှတ်ရေးအတွက် ဥပဒေအရအကျဉ်းချခံရသူတွေကို ပြန်လွှတ်ပေးရေးတောင်းဆိုတာကတော့ အခက်အခဲရှိပါတယ်။ ဘာလိုဆိုတော့ ကျနော်တို့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းသုံးဦးက ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းတွေကို ဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်နေစဉ်မှာ ဓါးစာခံအနေနဲ့ ဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်ပါတယ်။
ဦးဝင်းမင်း ။ ။ ဒီနေရာမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ တပ်မတော်ရဲ့ အခန်းကဏဏ္ဍတစုံတရာအရေးပါတာပေါ့။ အဲဒီအပေါ်မှာ လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး တပ်မတော်နဲ့ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဖို့က ဘယ်လိုရှိမလဲ။
ဒေါက်တာမျိုးညွန့် ။. ။ ၂ဖက်စလုံးမှာလည်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအတွက် ကမ်းလှမ်းနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေလည်းရှိတဲ့ အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေး ကမ်းလှမ်းဆွေးနွေးရေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တခုရှိတာကတော့ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့မှဆွေးနွေးနိုင်မယ်ဆိုပြီး ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ တောင်းဆိုမှုရှိရင်တော့ တွေ့ဆုံမှုမှာ အခက်ခဲရှိနိုင်ပါတယ် ။
ဦးဝင်းမင်း ။ ။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ဒေါက်တာမျိုးညွန့်ခင်ဗျာ။
မွနျမာနိုငျငံမှာ ငွိမျးခမျြးရေးဖွဈစဉျအတှကျ ရှေးကောကျပှဲအနိုငျရ NLD နဲ့စဈတပျကွား နှဈဖကျတှဆေုံ့ဆှေးနှေးရေး အလားအလာ ရှိနပေမေဲ့ ကွိုတငျသတျမှတျ စညျးကမျးခကျြမြိုးရှိလာမယျဆိုရငျ တှဆေုံ့ဖို့ အခကျအခဲရှိနိုငျကွောငျး NLD ပွောခှငျ့ရ ဒေါကျတာမြိုးညှနျ့ က ဗှီအိုအမွေနျမာပိုငျး သတငျးထောကျ ကိုဝငျးမငျးကို ပွောပါတယျ။
၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲမှာ အပွတျအသတျအနိုငျရသှားတဲ့ NLD ခေါငျးဆောငျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျနဲ့ ကာကှယျရေး စဈဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျတို့ နှဈဖကျကွား တှဆေုံ့မှုအလားအလာ ဘယျလိုရှိမလဲ။
NLD ပွောခှငျ့ရ ဒေါကျတာမြိုးညှနျ့ကို ဦးဝငျးမငျးက ဆကျသှယျမေးမွနျးထားပါတယျ။
ဦးဝင်းမင်း ။. ။ အခုတခေါကျရှေးကောကျပှဲအပွီး ကြောကျမဲမွို့နယျမှာ အနိုငျရအမတျတဦးပဈသတျခံရတာအပါအဝငျ ဖွဈလာတဲ့ထူးခွားဖွဈစဉျတှကေို ရှေးကောကျပှဲအနိုငျရအစိုးရပါတီ NLD အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျရဲ့ပွောခှငျ့ရ ဒေါကျတာမြိုးညှနျ့ကိုမေးရာမှာ ရှေးကောကျပှဲအောငျပှဲခံမိနျးခှနျးပွောတာကအစကှာသှားပွီလို့အခုလိုစရှငျးပွပါတယျ။
ဒေါကျတာမြိုးညှနျ့ ။ ။NLD အောငျပှဲမိနျးခှနျးကို ကနြျောတို့ရဲ့ ဥက်ကဌက ပွောလို့မရတော့ပါဘူး။ ရှေးကောကျပှဲလှနျသှားရငျ နိုငျငံရေးလုပျခှငျ့မရှိတော့ပါဘူး။ အဲဒီတော့ ကနြျောတို့ရဲ့ ဒုဥက်ကဌ (၂) ဒေါကျတာဇျောမွငျ့မောငျ က ရှေးကောကျပှဲအနှဈခြုပျသဘောမြိုးကို (၁၈)ရကျနကေ့ ပွောလိုကျပါပွီ။ အဲဒါကိုပဲ အောငျပှဲမိနျးခှနျးလို့ယူဆပါတယျ။ ၂ဝဝ၈ ဖှဲ့စညျးပုံက ထူးခွားတယျဗြ။ ကနြျောတို့ဝနျကွီးခြုပျတှအေထိက ပွောလို့ရတယျ။ ပွညျထောငျစုအဆငျ့ ဒုဝနျကွီးတှကေအထကျကို ပွောလို့မရတော့ဘူး။
ဦးဝငျးမငျး ။. ။ ဒီတခေါကျNLD အောငျပှဲကွညောခကျြထဲမှာ ဘယျလိုထူးခွားတာကောတှမေိ့လဲ။
ဒေါကျတာမြိုးညှနျ့ ။. ။ ထူးခွားတာကတော့ ကနြျောတို့အဖှဲ့ခြုပျက တိုငျးရငျးသားအရေးနဲ့ပတျသကျပွီး နောငျလာမဲ့ပွညျထောငျစုအရေးအတှကျ တိုငျးရငျးသားပါတီတှနေဲ့ပူးပေါငျးဆောငျရှကျဖို့ဖိတျချေါလိုကျတာကတော့ ပွောလို့ရပါတယျ။
ဦးဝငျးမငျး ။. ။ အဲဒီအပျေါမှာကော နောကျထပျတိုးတကျမှုတှေ ထူးခွားမှုတှရှေိလာသေးလား။
ဒေါကျတာမြိုးညှနျ့ ။ ။ ယဘြေူယအြားဖွငျ့တော့ တိုငျးရငျးသားပါတီအမြားစုက လကျခံပါတယျ။ အဓိကကတော့ ဖိတျချေါတာပဲဖွဈပါတယျ။ ဘယျလိုသှားမယျဆိုတာကတော့ ဆှေးနှေးမှုတှပွေီးမှ ဆုံးဖွတျနိုငျမှာဖွဈတော့ သူတို့အဖို့ ထငျရှားတဲ့ တိကတြဲ့သတငျးစကားမပါဘူးဆိုပွီး တခြို့ကတြော့ ဘယျလိုဆုံးဖွတျရမှနျမသိဖွဈနတောတော့ရှိပါတယျ။
ဦးဝငျးမငျး ။ ။ အဲဒီအပျေါမှာကော သူတို့ကို ထပျဖွညျ့ရှငျးပွစရာရှိသလား။
ဒေါကျတာမြိုးညှနျ့ ။ ။ ကနြျောတို့အတိအကသြတျမှတျထားတာမရှိသေးပါဘူး။ ကနြျောတို့ဆှေးနှေးမှုရလဒျတှအေရပဲ ပုံဖျောရမှာဖွဈပါတယျ။
ဦးဝငျးမငျး ။ ။ ဒီရကျပိုငျးအတှငျးမှာ ထူးခွားတာကတော့ ကြောကျမဲဖွဈစဉျပေါ့။ လကျရှိစုံစမျးစဈဆေးမှုတှအေရ နောငျမဖွဈအောငျ တားဆီးမှုအပိုငျးမှာရော
ဒေါကျတာမြိုးညှနျ့ ။. ။ အဲဒီနရောက နဂိုလျကတညျးက လုံခွုံရေးအားနညျးတဲ့နရော ဖွဈပါတယျ။ ရှေးယခငျကလညျး ဒီလိုပဲ လုပျကွံသတျဖွတျမှုတှအေကွိမျကွိမျဖွဈခဲ့ဖူးတော့ နောငျမဖွဈအောငျကတော့ ပွညျတှငျးစဈခြုပျငွိမျးသှားမှသာ အကောငျးဆုံးတားဆီးမှုဖွဈပါလိမျ့မယျ။
ဦးဝငျးမငျး ။ ။ ဒီပွညျတှငျးစဈခြုပျငွိမျးရေးအတှကျ လတျတလောလုပျဆောငျဖို့ပွငျဆငျထားမှုအနအေထားရော အထူးသဖွငျ့တော့ (၂) နှဈနီးပါးကွာလာတဲ့ ရခိုငျပွညျနယျမှာ AA ရခိုငျလကျနကျကိုငျတပျဖှဲ့နဲ့ တပျမတျောတို့အကွားအပွနျအလှနျကွညောခကျြတှထေုတျတောငျးဆိုကွိုဆိုအပွီး တိုကျပှဲတှကေစငွိမျလာတဲ့အနအေထားမြိုးမှာ နောကျထပျတိုးတကျလာနိုငျရော
ဒေါကျတာမြိုးညှနျ့ ။. ။ ကနြျောတို့ငွိမျးခမျြးရေးဆှေးနှေးမှုအတှကျတော့ ဘယျလိုအဟနျ့အတားမှမရှိပါဘူး။ သို့သျောလညျး AA ဖှဲ့ကကွညောထားတဲ့ ဖမျးဆီးခံကိုယျစားလှယျလောငျးသုံးဦးပွနျလှတျရေးအတှကျ ဥပဒအေရအကဉျြးခခြံရသူတှကေို ပွနျလှတျပေးရေးတောငျးဆိုတာကတော့ အခကျအခဲရှိပါတယျ။ ဘာလိုဆိုတော့ ကနြျောတို့ကိုယျစားလှယျလောငျးသုံးဦးက ရှေးကောကျပှဲလုပျငနျးတှကေို ဥပဒနေဲ့အညီဆောငျရှကျနစေဉျမှာ ဓါးစာခံအနနေဲ့ ဖမျးဆီးခံရတာဖွဈပါတယျ။
ဦးဝငျးမငျး ။ ။ ဒီနရောမှာ ငွိမျးခမျြးရေးနဲ့ပတျသကျလို့ တပျမတျောရဲ့ အခနျးကဏဏ်ဍတစုံတရာအရေးပါတာပေါ့။ အဲဒီအပျေါမှာ လကျရှိအစိုးရအနနေဲ့ ရှေးကောကျပှဲအပွီး တပျမတျောနဲ့ ညှိနှိုငျးဆှေးနှေးဖို့က ဘယျလိုရှိမလဲ။
ဒေါကျတာမြိုးညှနျ့ ။. ။ ၂ဖကျစလုံးမှာလညျး တှဆေုံ့ဆှေးနှေးရေးအတှကျ ကမျးလှမျးနိုငျတဲ့အခှငျ့အလမျးတှလေညျးရှိတဲ့ အတှကျ ငွိမျးခမျြးရေး ကမျးလှမျးဆှေးနှေးရေးဖွဈနိုငျပါတယျ။ တခုရှိတာကတော့ ဘယျလိုပုံစံနဲ့မှဆှေးနှေးနိုငျမယျဆိုပွီး ကွိုတငျသတျမှတျထားတဲ့ တောငျးဆိုမှုရှိရငျတော့ တှဆေုံ့မှုမှာ အခကျခဲရှိနိုငျပါတယျ ။
ဦးဝငျးမငျး ။ ။ ကြေးဇူးအမြားကွီးတငျပါတယျ ဒေါကျတာမြိုးညှနျ့ခငျဗြာ။
နိုင်ငံရေး တွေ့ဆုံမှုအပေါ် တုန့်ပြန်ချက်များ
သမ္မတ၊ ကာချုပ် တို့နဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ဒေါ်စု တွေ့မည်
ဒေါ်စုနဲ့ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် တွေ့ဆုံ